Zlatan Ibrahimovic Oo Shaaciyey Man United iyo PSG Midka Uu Guusha La Doonayo Iyo Sababta Xulashadiisa | Laacib.net
Zlatan Ibrahimovic Oo Shaaciyey Man United iyo PSG Midka Uu Guusha La Doonayo Iyo Sababta Xulashadiisa
Zlatan Ibrahimovic waxa uu usoo ciyaaray PSG ka hor intii aanu ka degin Manchester United oo uu la qaatay sannad uu kula guuleystay Europa League, isla markaana ka caawiyey inay usoo baxdo Champions League.
Halyeygan oo sidoo kale usoo ciyaaray Juventus, Inter Milan, AC Milan iyo Barcelona, ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda reer France ee PSG ay ka adkaan doonto Manchester United oo ay u gudbi doonto siddeed dhamaadka tartanka Champions League.
Ibrahimovic oo ay da’diisu tahay 37 una ciyaara LA Galaxy, ayaa waxa uu tibaaxay in marka la eego tayada labada kooxood ee Man United iyo PSG ay kooxda reer France ka wanaagsan tahay.
“PSG waxay hadda la ciyaaraysaa kooxaha waqtigeeda oo kale ku jira, markaa wax walba way ku dhici karayaan United si kasta oo ay ula ciyaaraanba.” Sidaas ayuu yidhi Ibrahimovic.
Zlatan Ibrahimovic oo u warramayey Fox Sports, waxa uu tilmaamay in dhaawacyada PSG ay hoos u dhigayaan tayadeeda, laakiin ay haddana weli tahay kooxda saadaasha guushu ay u badan tahay.
“Haddiii aad hore ii weydiin lahayd, waxaan ku odhan lahaa ‘OK PSG ayaa soo baxaysa’, laakiin hadda waxay ila tahay inay adag tahay. Dabcan, koox kastaa way tebaysaa Neymar, Cavani iyo Meunier, saamayntana way dareemaysaa, laakiin taasi waxay fursad siinaysaa ciyaartoy kasta oo kale.” Ayuu yidhi.
Zlatan Ibrahimovic ayaa waxa uu PSG u ciyaaray afar sannadood oo uu guulo badan la gaadhay, ka hor intii aanu Manchester United uga soo wareegin, taas oo uu usii dhaafay LA Galaxy.